I-Oukitel iveza i-C15 Pro +, ingxelo ene-vitaminized ye-C15 Pro | I-Androidsis
Ihlabathi lomnxeba alikho kuphela kwii-terminals eziphezulu, nangona ziyimodeli ngakumbi ukutsala umdla ngenxa kungekuphela kwexabiso labo, kodwa nakwizibonelelo ezahlukeneyo abasinike zona. Kwinqanaba elisezantsi nelokungena sinenani elikhulu lezixhobo. I-Oukitel ngomnye wabavelisi obheja kakhulu kweli candelo.
Inkampani yaseAsia iOukitel yasungula ngoFebruwari odlulileyo I-Oukitel C15 ProIsiphelo sendlela esine- izibonelelo ezifanelekileyo ilungele abo bantu bafuna ukubiza i-smartphone, thatha ifoto engaqhelekanga, jonga i-imeyile kunye neenethiwekhi zentlalo ... hayi kakhulu. Namhlanje sithetha ngohlobo lwe-Plus, uguqulelo olonyusa i-RAM kunye nendawo yokugcina.
Umahluko ophambili kunye nophela esiwufumanayo phakathi kwe-Oukitel C15 Pro kunye ne-Oukitel C15 Pro + yi-RAM kunye nendawo yokugcina. Inguqulelo ye-Plus isinika i-3 GB ye-RAM, ezimbini zohlobo oluqhelekileyo kunye ne-32 GB yendawo yokugcina endaweni ye-16GB. Eyona GB ye-RAM iyaxatyiswa, njengendawo yokugcina eyongezelelweyo, nangona kunjalo, esi sigxina sisajolise kuluhlu lokungena kwicandelo leefowuni.
Ukucaciswa kwe-Oukitel C15 Pro +
Umzekelo I-C15 Pro
Inkqubo 6761 GHz MediaTek MT2
Isikrini I-HD-IPS ye-6.088 intshi
Ikhamera engasemva Ezimbini 8 Mpx + 2 Mpx
Ikhamera yangaphambili 5 Mpx
Imemori ye-RAM 3 GB
Ukugcina 32 GB
I-SIM yesibili SI
Umfundi weFingerprint SI
Ibhetri 3.200 mah
Inkqubo yokusebenza I-Android 9 Pie
U bunzima 222 g
Ubukhulu 10 x 5 x 3
Ngesikrini esingu-6,088-intshi kunye nefomathi ye-19: 9, isinika umyinge wescreen se-85,5% kwaye sikhuselwe yiglasi ye-Asahi 2. Ngaphakathi, sifumana iprosesa yeMediaTek MT6761 ihamba kunye I-3 GB ye-RAM kunye ne-32 GB yendawo yokugcina.
Uphengululo lwe-OUKITEL C15 Pro
Ngasemva, sifumana ikhamera ephambili ye-8 mpx, ehamba nekhamera yesibini yesibini. Umphambili ufikelela kwi-2 mpx kwaye uyasivumela vula itheminali usebenzisa itekhnoloji yokwamkelwa kobuso.
Iseti iphela inikwe amandla yiPie ye-Android kwaye iyafumaneka ngemibala emithathu: emnyama, emfusa / violet, kunye nongcwalazi. Ixabiso lokugqibela li- $ 74,99, Kwaye siya kufika kwintengiso ekuqaleni kukaJulayi ngesithembiso esinomdla esiza kukwazisa malunga naso kungekudala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » I-Oukitel iveza i-C15 Pro +, ingxelo ene-vitaminized ye-C15 Pro
Ubugcisa be "flabby parkour" obuBuntu: I-Flat Fall ngoku iyafumaneka kwiVenkile yokuDlala